ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဖိုက်တင်မင်းသားကြီးဦးအောင်ပိုင်ကွယ်လွန်သွားရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဦးအောင်ပိုင်ရဲ့ဇနီး(ရုပ်သံ) – Shwe Yaung Media
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဖိုက်တင်မင်းသားကြီးဦးအောင်ပိုင်ကွယ်လွန်သွားရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဦးအောင်ပိုင်ရဲ့ဇနီး(ရုပ်သံ)
2021 | 21/11/2021 | News | No Comments
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဖိုက်တင်မင်းသားကြီးဦးအောင်ပိုင်ကွယ်လွန်သွားရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဦးအောင်ပိုင်ရဲ့ဇနီး
မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာ အောင်မြင်မှုတစ်နေရာကို ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်တင် မင်းသားအောင်ပိုင်ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်.
အောင်ပိုင်ကတော့ အနုပညာအရည်အချင်းပြည့်ဝသူ ဖြစ်တာကြောင့် ခုချိန်ထိပရိသတ်တွေက မမေ့လျော့ပဲ မှတ်မိနေကြသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တုန်းကတော့ အောင်ပိုင်တစ်ယောက်လူ့လောကကြီးကို နုတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်သွားကြောင့် အောင်ပိုင့်ကိုချစ်‌ကြတဲ့ ပရိသတ်များနဲ့ မိတ်ဆွေများလည်း ဝမ်းနည်းခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
ဒီနေ့လေးမှာတော့ အောင်ပိုင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ချိူချိူသန်းက ” အောင်ပိုင်ကတော့ အရက်တွေအလွန်အကျွံသောက်တာကြောင့် အသဲမကောင်းတော့ဘဲ ကျောက်ကပ်ပါ ပျက်စီးပြီးသေဆုံးသွားတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်နော်..
သတိလစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်ခါတည်း သတိပြန်မလည်တော့ဘဲ အသက်ပါ ပါသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွ ာနဲ့ပြောပြာခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် အိမ်ထောင်သက်၂၁ နှစ်မှာ အရက်သောက်တာကလွဲလို့ ကျန်တာအိမ်ထောင်ဦးစီးပီသခဲ့တဲ့ အကြောင်းစုံကိုလည်း ပြောထားပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်ပိုင်ရဲ့ မိသားစုကိုလည်း
Source: Myanmar Celebrity TV Interview
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဖိုက္တင္မင္းသားႀကီးဦးေအာင္ပိုင္ကြယ္လြန္သြားရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကိုမ်က္ရည္ေတြနဲ႕ေျပာျပလာတဲ့ ဦးေအာင္ပိုင္ရဲ႕ဇနီး
ျမန္မာဇာတ္လမ္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ေနရာကို ရယူထားနိုင္ခဲ့တဲ့ ဖိုင္တင္ မင္းသားေအာင္ပိုင္ကိုေတာ့ လူတိုင္းသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္. ေအာင္ပိုင္ကေတာ့ အႏုပညာအရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခုခ်ိန္ထိပရိသတ္ေတြက မေမ့ေလ်ာ့ပဲ မွတ္မိေနၾကေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. သ႐ုပ္ေဆာင္သီဟတင္စိုးႏွင့္လည္း အတြဲဖက္ညီညီသ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္၊
သူဟာသ႐ုပ္ေဆာင္တာအရမ္းပီပင္ၿပီးေတာ္လွန္ေရးဇတ္ကားမ်ားစြာပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္တုန္းကေတာ့ ေအာင္ပိုင္တစ္ေယာက္လူ႔ေလာကႀကီးကို ႏုတ္ဆက္သြားၿပီျဖစ္သြားေၾကာင့္ ေအာင္ပိုင့္ကိုခ်စ္‌ၾကတဲ့ ပရိသတ္မ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဝမ္းနည္းခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ေအာင္ပိုင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခ်ိဴခ်ိဴသန္းက ” ေအာင္ပိုင္ကေတာ့ အရက္ေတြအလြန္အကၽြံေသာက္တာေၾကာင့္ အသဲမေကာင္းေတာ့ဘဲ ေက်ာက္ကပ္ပါ ပ်က္စီးၿပီးေသဆုံးသြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္ေနာ္..
သတိလစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့တစ္ခါတည္း သတိျပန္မလည္ေတာ့ဘဲ အသက္ပါ ပါသြားတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြ ာနဲ႔ေျပာျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ေထာင္သက္၂၁ ႏွစ္မွာ အရက္ေသာက္တာကလြဲလို႔ က်န္တာအိမ္ေထာင္ဦးစီးပီသခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းစုံကိုလည္း ေျပာထားပါေသးတယ္။ပရိသတ္ႀကီးလည္း က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ဦးေအာင္ပိုင္ရဲ့ မိသားစုကိုလည္း အားေပးစကားေလးတစ္ခုခုေလာက္ေရးေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္..
တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးထားသည့် အနုပညာရှင် များ ဆယ်လီများ၏ အမှုများ ပိတ်သိမ်းကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး လာရောက်ခိုလှုံကြတဲ့ မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တချို့ နေရပ်ပြန်သွားစဉ်မှာ နွေးထွေးပျူငှာစွာ လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းစစ်သားများ